Shan resident boycotted election because of manipulation of voter list | Burma Election Tracker
Shan resident boycotted election because of manipulation of voter list Posted in Access to Information
A resident of Shan State who spoke to Burma Election Tracker said: "Only one or two of the entire household were eligible to vote. We had to make name cards before we could vote. When we wanted to vote we had to go to the polling station and ask for the name cards. That's why I did not vote. Many people in my area do not understand about politics, but they have interest in it. We want to do business peacefully. I don't think this election can change our lives."
This report exemplifies how the voting process is not systematic and is open to manipulation. The lack of verification of voter ID means there is no way of ensuring that there will not be individuals voting twice, voting if they are not eligible, or having someone else fraudulently cast thier vote.
တစ်အိမ်လုံးမှာ တစ်ယောက်နှစ်ယောက်ဘဲမေးပေးခွင့်ရတယ်၊ နာမည်ကဒ်လုပ်ပြီးမှ မဲပေးရတယ်၊ မဲပေးချင်တယ်ဆိုမှမဲရုံသွားပြီး တောင်းရသည်။ ဒါကြောင့်မဲမပေးတော့ပါ။ လာရှိုးပြည်သူအများစုက နိုင်ငံရေးသိပ်နားမလည်ကြပါ၊ ဒါပေမယ့်စိတ်ဝင်စားမှုတော့ရှိပါသည်။ အေးအေးချမ်းချမ်း စီးပွားလုပ်ကိုင်စားချင်ပါတယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေတဆင့်မိမိတို့ ဘ၀များ ပြောင်းလာနိုင်လိမ့်မည်ကိုတော့မထင်ပါ။